पारस – ताजा समाचार
पुर्वयुवराज पारसले दिए प्रेमिका सोनिकालाई चुम्बन : हेर्नुहोस भिडियो सहित
ईटहरी । पुर्बयुवराज पारस शाहले उनकी प्रेमिका भनिएकी चर्चित युटयुबर सोनिका रोकायालाई २४ पुरा भई २५ बर्ष लागेकोमा हिराको हार उपहार दिएका छन । सोनिका आफैले सार्बजनिक गरिएको भिडियोमा शाहले उनलाई चुम्बन गरेको दृश्य समेत देख्न सकिन्छ । खुसी मुद्रामा देखिएका पारस र सोनिकाको प्रेम सम्बन्धका बारेमा यसअघि नै चचौ हुँदै आएको छ । पारसले […]
सबै मान्छे नराम्रा हुँदैनन् : पूर्व युवराज पारस शाह
काठमाडौं– पूर्व युवराज पारस शाह बेला बेलामा चर्चामा आउने गरेका छन् । पछिल्लो समय पारस युट्युवर सोनिका रोकायासँगको हिमचिमका कारण चर्चामा रहेका छन् । केही समयअघि पारस सोनिकासँग सँगै देखिने गरेका छन् । पोखराको एक होटल बाहिर मोटरसाइकलमा कसैलाई पर्खिएर बसेका पारसको बाइकको पछाडि सोनिका बसेपछि पारसले बाइक कुदाएदेखि पारस सोनिका सम्बन्ध सतहमा आएको थियो […]
उस्ताउस्तै घटना तर, फरक व्यवहार : आस्थामाथि उजुरी, पारसलाई छुट !
काठमाडौँ । नेपालको कानुन दैवले जानुन । एकै ठाउँ । घट ना उस्तै प्रकृति अर्थात ‘दुर्व्य वहार’ । तर, किन ‘सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन’ ? यो प्रश्न प्रहरी अधिकारी र सम्बन्धितप्रति तेर्सिएको छ । केही महिनाअघि पूर्वयुवराज पारस साहले विमानस्थलमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरी सहायक निरीक्षक (सई)माथि हातपiतको प्रयास गरे । यस्तै गायिका आस्था राउतले […]
छोराछोरीसँग पोखरामा पारसले यसरी हर्षका साथ मनाए जन्मदिन, तर हिमानी गइनन् !
काठमाडौं, १७ पुस । युट्युवर सोनिका रोकायासँगको सम्बन्धका कारण विवादमा आइरहेका पूर्वयुवराज पारस शाहले पोखरामा छोराछोरीका साथमा ४९ औं जन्मदिन मनाएका छन् । किंग्स लङमा उनले छोरीहरू पूर्णिका, कृतिका र छोरा हृदयेन्द्र शाहसँग जन्मदिन मनाएका हुन् । उनको जन्मोत्सवका अवसरमा भने पत्नी हिमानी उपस्थित थिइनन् । पारस र हिमानीको सम्बन्धमा खटपट रहेका कारण उनी नगएको […]
पारशको जन्मदिनः मध्यरातमा सोनिकाले दिइन् यस्तो गिफ्ट
काठमाडौं। पुर्वयुवराज पारश शाह आज ४८ औँ वर्ष पुगेका छन् । २०२८ साल पौष १५ गते जन्मिएका पारश पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका एकमात्र छोरा हुन् । अहिले युटुबर तथा भिजे सोनिका रोकायासँग नजिकिएका पारश संचारमाध्यममा बारम्बार आइरहेका छन् । सोनिकाले उनै पारशलाई मध्यरात १२ बजे भिडियो शेयर गर्दै शुभकामना दिएकि छिन् । उनले गिफ्ट स्वरुप पारशलाई […]
काठमाडौ । पूर्व युवराज पारस साह र यूट्युबर सोनिका रोकायाबीचका अनेकौँ समाचार बाहिर आईरहेका छन् । उनीहरुका तस्वीरले सामाजिक सञ्जाल रंगिएका छन् । जसले पारस विवादमा तानिएका छन् । तर पारसको पछिल्लो खुलासाले केही मत्थर भने अवश्य पार्नेछ । सोनिकाले यसअघि नै पारसका बुवा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग मिटिङ र पत्नी हिमानीसँग कुराकानी गर्ने गरेको बताएकी […]
काठमाडौँ । पुर्व राजकुमार पारस शाहको पछिल्लो सोशल मिडिया प्रोफाइललाई लिएर उनका फ्यानहरु पनि निराश भएका छन् । सोनिका रोकायासँगको तस्बिर आफ्नै फेसबुक प्रोफाइलमा राखेपछि पूर्व राजकुमारका समर्थकहरू र शुभचिन्तकहरूलाई निराश भएका हुन् । उनले सोनिका रोकायासँगको प्रोफाइल फोटो आफ्नो फेसबुकमा राखेपछि उनी पुनः विवादमा आएका हुन् । यद्यपि उनीबारे धेरै यूट्यूब भिडियोहरूले अफवाह फैलाउने […]
पारस र सोनिकाको गोप्य च्याट सार्वजनिक
काठमाडौं – पूर्वयुवराज पारस शाह र मोडल तथा सोनिका रोकाया केही समययता नजिक छन् । यी दुई प्रेममा रहेको चर्चा चल्ने गर्छ । यद्यपि दुवैले प्रेममा नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । यता पारस र सोनिकाको हिमचिम भने दिनप्रतिदिन बढ्दैछ । सोनिका र पारस पोखरादेखि अन्नपूर्ण बेसक्याम्पसम्म सँगै घुम्न गएका तस्वीर एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक […]
सोनिकालाई पिङ खेलाउँदै पूर्वयुवराज पारस !
पूर्वयुवराज पारसले सोनिका नामकी युवतीलाई लिंगेपिङ खेलाइरहेको भिडियो युट्युवमा आएको छ । सम्भवतः यो भिडियो तिहारका बेला पोखरामा खिचिएको हुनुपर्छ । सोनिका आफैंले पारससँग विभिन्न समयमा पोखरादेखि मुक्तिनाथसम्म घुमघाम गर्दै भिडियो बनाएर युट्युवमा हालेकी हुन् । भिडियोले उनीहरुबीच झांगिएको अन्तरंग मित्रताको वयान गर्छन् । यसअघि उनीहरुको निकटताबारे गसिपहरु बनिरहेका थिए । सोनिकाले आफूहरुबीच असल मित्रता […]
काठमाडौं । मुस्ताङ भ्रमणमा रहेका पूर्वयुवराज पारस शाहले मुक्तिनाथ दर्शन गरेका छन्। पारस पोखरादेखि म्याग्दी हुँदै बुधबार मुस्ताङको जामसोम पुगेका हुन्। बिहीबार उनले मुस्ताङको पवित्र धार्मिकस्थल मुक्तिनाथको दर्शन गरेका हुन्। उनले मुक्तिनाथ दर्शन गरेका केही तस्बिर सार्वजनिक भएका छन्। पारस बिहीबार मुक्तिनाथ दर्शन गरेर जोमसोम फर्किएका छन्। मुक्तिनाथ जाने क्रममा उनले रानीपौवा बजारदेखि मन्दिर परिसर […]
पूर्वयुवराज पारस शाह र समलिङ्गी मोडल सोनीका रोकायबीचको अफयर्स चलिरहेको खबरले यतिबेला चर्चा पाएको छ । पारससँग सङ्गत् बढेपछि सोनिकाले अश्लील हर्कतहरु पनि बन्द गरेकी छिन । सार्वजनिकरुपमै अश्लील तथा छाडा शब्दहरु बोल्ने र अर्धनग्न भएर हिड्ने जस्ता कार्यहरुले युटुबर समेत रहेकी सोनीका बेला बखत चर्चामा आउने गरेकी छिन । तिनै सोनीका पूर्व युवराज पारस […]
मुस्ताङ। पूर्वयुवराज शाह पोखरादेखि म्याग्दी हुँदै बुधबार दिउँसो मुस्ताङ पुगेका छन् । शाहले होटलका कर्मचारीसँग खिचाएको फोटो बाहिरिएपछि उनि मुस्ताङ्ग पुगेको जानकारी भएको हो । उनी आफ्ना निकट सहकर्मीका साथ मुस्ताङको घुमफिरमा पुगेको बताइएको छ । मुस्ताङ आउने क्रममा शाह थासाङ गाउँपालिका लेतेस्थित होटल सियुमा बास बसेका थिए । उक्त लज संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमप्रसाद […]